Qaybta Hollywood ee 'SMPTE' si ay uga baaraan degto "Deepfakes" ee Shirka Noolaha '| NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner iyo Soosaaraha NAB Show LIVE
Home » News » Qaybta Hollywood ee 'SMPTE' si loo baadho "Deepfakes" ee Shirka Noofambar
Qaybta Hollywood ee 'SMPTE' si loo baadho "Deepfakes" ee Shirka Noofambar
Guddi khubaro ah ayaa baari doona tikniyoolajiyada soo ifbaxaya ee u oggolaanaya abuuritaanka bini-aadamka isku-ekaanshaha madaddaalada iyo ujeeddooyin dheeri ah.
Los Angeles - The Hollywood Qaybta of SMPTE®, ururka oo qeexaya mustaqbalka sheeko-sheegashada, wuxuu baari doonaa ballanqaadka, iyo qatarta suurtagalka ah, ee aadanaha dhijitaalka ah iyo waxa loogu yeero qoto-dheer kulankiisa billaha ah ee Talaadada, Noofembar 19, Hollywood. Waxaa lagu xiray Raadiyaha, Telefishanka, Digital Newsroom Association (RTDNA), dhacdada lacag la’aanta ah waxaa ku jiri doona wada-hadal guddi ah oo ka kooban khuburo ku xeel dheer arrimaha bani'aadamnimada.
Deepfakes waa muuqaallada aadanaha ee la aamini karo oo ay ku dhexjiraan farsamooyin sirdoon oo aan dabiici ahayn oo ka yimid walxo dhab ah oo gabi ahaanba aan run ahayn ama "been abuur" ah. Gudaha Hollywood, bina aadamka dhijitaalka ah, qancinta dhagaystayaasha dhagar qabe ah, ayaa sanadihii la soo dhaafay ahaa muuqaalka xurmada leh ee saameynta aragtida. Labada farsamadoodba waxaa loogu talagalay inay khiyaameeyaan aragtida, laakiin, halka bina-aadamka dhijitaalka ah loo dhisay inay madadaalo, qoto-dheer ayaa loo adeegsan karaa marin-habaabinta iyo marin-habaabinta, badiyaa ujeeddooyin aan la xiriirin.
SMPTE Hollywood iyo RTDNA waxay soo bandhigi doonaan gebi ahaanba xaqiiqada dhabta ah ee qoto dheer iyo bina aadanka. Guddigu waxay sharxi doonaan taariikhda bini-aadamka dijitaalka ah iyo qoto-dheerida, caqabadaha ku jira abuuritaanka si qancin ah, iyo haddii / sida wararka iyo xirfadlayaasha madadaalada ay u arki karaan qotodheer.
Soo bandhigayaasha waxaa ka mid ah Chaos Group Lab madaxa cilmi baarista iyo horumarka Christopher Nichols, oo hogaamiya Digital Human League, oo kafaala qaada isha furan ee Wikihuman; Corridor Digital's Niko Pueringer, oo soo saartay qaab Internet ah oo qaab gaaban ah in ka badan toban sano isla markaana khabiir ku ah abuurista iyo ogaanshaha qotodheer ee qotodheer; iyo Shruti Agarwal, Ph.D. arday ka tirsan waaxda injineeriyada korontada iyo cilmiga kumbuyuutarka ee jaamacada California, Berkeley, oo cilmi baaris ku sameynaya multimedia forensics. Wariye madaxbanaan Debra Kaufman (Xarunta USC Entertainment Technology Center, New York Times, Los Angeles Waqtiyada, Wired, Reuters, Bloomberg American Cinematographer, Cinematographers International Guine Magazine) ayaa dhexdhexaadinaya dooda.
Kaufman iyo Linda Rosner ayaa soo saaray madasha.
Waa maxay: SMPTE Hollywood Qaybta, Kulan November
Topic: Bini-aadamka dhijitaalka ah iyo Balaayada: Ballanqaadka Hal-abuurka iyo Halista
Goorma: Talaado, Noofembar 19, 2019. 6: 30 pm - Soo dhoweynta 7: 30 pm - Bandhig iyo Dood Wada-hadal
Xaggee: Hollywood Mareegaha Mareykanka Post 43, 2035 N. Highland Ave., Los Angeles, CA 90068
SOO SAARID: Gawaarida xaddidan ee loogu talagalay kuwa wata kaararka HANDICAPPED ama qof kasta oo u baahan in baarkin la dhigto ayaa laga heli karaa gadaal AMAANKA AMARKA. DHAMMAAN kuwa kale ee soo xaadira waa inay ku farxaan meel badan oo ah ACROSS Highland oo ku taal Camrose Dr / Milner Road. Saamigaasu waa hortayda Hollywood Xaraashka DeMille ee dhaxalka.
SAACADAHA GAARKA: Socdaal loo habeeyay ee Legion taariikheed ee Mareykanka #43, oo lagu dhisay 1929 waxaa loo sameyn doonaa diyaar u ah deggeneyaasha hore. Booqashada waxaa ku jiri doona qolka saadaasha casriga ah ee 35 /70 mm FILM iyo muuqaal Christie 4K DIGITAL DIGITAL. Fadlan ku muuji EVENTBRITE xulashadaada safarka 5, 5: 30 ama 6 pm.
SMPTE Hollywood Kulamada qaybaha waa BILAASH. Kuwa aan xubin ka ahayn waa la soo dhaweynayaa.
ku saabsan SMPTE® Hollywood Qaybta
The Hollywood Qaybta of SMPTE® waxaa markii hore loo abaabulay sida Qaybta West Coast Section ee 1928. Maanta, sida gaarka u ah SMPTE Region, waxaa koobay badan 1,200 SMPTE Xubnaha la dano guud ee technology mooshin-imaging ee Greater Los Angeles degaanka. The Hollywood Qaybta bixisaa kulamo free bil kasta in u furan yihiin SMPTE Xubnaha iyo kuwa aan xubnaha ka ahaynba. Macluumaadka ku saabsan shirarka waxaa lagu dhejiyaa bogga internetka www.smpte.org/Hollywood.
Bulshada Motion Picture iyo Engineers Television, ama SMPTE, wuxuu qeexayaa mustaqbalka sheekada. Hadafka jimicsigu waa inuu awood u yeesho qaab-dhismeedka farsamo ee u oggolaanaya bulshada xirfad-yaqaannada adduunka in ay sameyso warbaahin ujeedooyin farshaxan, waxbarasho, iyo madadaalo iyo in ay u qaybiyaan waxyaabahaas faa'iidada iyo raaxada dadka adduunka oo idil. Maaddaama bulsho iskaa wax u qabso ku leh oo ku takhasusay farsamoyaqaannada, horumarinta, iyo hal-abuurka, SMPTE wuxuu ku hawlan yahay in uu wado tayada iyo horumarinta sawirrada dhaqdhaqaaqa, telefishanka, iyo warbaahinta xirfadeed. Bulshadu waxay dejisaa heerarka warshadaha oo ka caawiya ganacsiyada in ay sarreyso suuqyadooda si wax-ku-ool ah oo wax-ku-ool ah, waxay bixiyaan waxbarasho ku habboon oo taageera kobaca shaqooyinka xubnaha, iyo kobcinta beesha xubinimo iyo kala duwan.
Macluumaad ku saabsan ku biirista SMPTE waxaa laga heli karaa smpte.org/join.
Ku saabsan RTDNA
Ururka Raadiyooyinka ee Telefishinka Dijital ah ee Telefishinka (RTDNA) waa hay'adda ugu weyn adduunka ee xirfadda u leh oo keliya oo si gaar ah ugu go'doomin baahinta iyo joornaaliistaha dhijitaalka ah. Waxaa lagu aasaasay urur aasaasay 1946, howsha RTDNA waa in la dardar galiyo oo la ilaaliyo saxafiga mas'uuliyadiisa leh. RTDNA waxay difaacdaa Xuquuqda Wax-ka-beddelka Koowaad ee saxafiyiinta elektaroniga ah ee dalka oo dhan, waxay sharftaa shaqooyinka muhiimka ah ee xirfadda iyada oo loo marayo Abaalmarinta Edward R. Murrow waxayna siisaa xubnayaasha tababaro lagu dhiirigelinayo heerarka anshaxa, hoggaanka qolka wararka iyo hal-abuurka warshadaha.
Broadcast Engineer Broadcast Engineering CES2017 qoto dheer Graham Chapman Prmoted toEditor MStar SMPTE SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 COLONIE / Chicago TV Technology Video Engineer Raadka Visual	2019-11-06
Previous: LBI Media Inc.'s KBUE-FM: Radiyowga Ugu Horeeya ee Los Angeles Radio Station